Top 12 Loài Sen đá đẹp đốt Tim Mọi Người | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Top 12 Loài Sen đá đẹp đốt Tim Mọi Người | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ngoku, ilitye lelotus kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo; kwaye zezinye zeentlobo ibhonsayi encinci Ithandwa ngabantu abaninzi ukusuka kwabancinci ukuya kubantu abadala. Kuba, zininzi iintlobo ezintle ze-succulents ezibonakala zibulela kuphuhliso lwentengiso, ziya zihluka kwaye zininzi; Ukusuka kwisitayile ukuya kumbala. Ngaphezu koko, ii-succulents ziza kwiintlobo ngeentlobo zeemilo ezintle kakhulu nezinemibala.
Iintlobo ezintle zelotus zamatye zishukumisa abantu
Khawucinge ukuba ngenye imini ubunayo igadi yelotus yamatye ngeentlobo ezahlukeneyo; imibala eyahlukileyo; Iimilo ezahlukeneyo ngokuqinisekileyo Igadi yeLotus yelitye Iya kwenza intliziyo yomntu wonke igubhaze xa eqala ukuyibona! Apha, kufuneka Hanoi Bonsai uphando Iindidi ezili-12 eziphezulu zezityalo ezinencasa ezibamba iintliziyo zabantu “ziyavuthuza” kwimarike namhlanje.
Iintlobo ezintle ze-succulents zaphula intliziyo yomntu wonke
1 Ukuchonga iimpawu zeentlobo ze-succulent
2 Iintlobo ezidumileyo ze-lotus zamatye namhlanje
2.1 Ilotus yelitye leRuby
2.2 Dola ilitye lotus
2.3 Ilotus yelitye elimdaka
2.4 I-lotus yelitye elimnyama
2.5 Ilitye likaBuddha Lotus
2.6 Lotus ilitye jade
2.7 I-lotus yelitye elineendlela ezine
2.8 Ilotus yamatye edayimane
2.9 Intliziyo yelitye lotus
2.10 I-lotus yamatye eChrysanthemum
2.11 Ilotus yamatye enamaphiko ebhabhathane
2.12 Ilotus yelitye likaDragon
Ukuchonga iimpawu zeentlobo ze-succulent
Ilitye lelotus aka phakathi kwesikhululo; intyatyambo yamatye; igama labo lesiNgesi nguSucculent. ILotus yelitye sisityalo esiphuma kusapho lwezityalo ezinencindi. I-Lotus yelitye ngumthi omncinci, phantse zonke iintlobo ze-succulents zinamagqabi kuphela ngaphandle kwesiqu.
Ilotus yamatye entle engenamthungo ithandwa kakhulu
Amagqabi elotus anencindi, iincam zamagqabi zixande; zigqubelane njengeentyatyambo zelotus zibaleka zidubula. Igama ilitye lelotus Oku kunokwenzeka kuba esi sityalo sithanda ukukhula ematyeni kwaye simile okwentyatyambo yelotus.
Intyatyambo entle kaBuddha yelotus
Ilitye lelotus sisityalo esivumelana kakhulu kuzo zonke iindawo zokuhlala, asifuni kakhulu malunga nokukhula kunye neemeko zophuhliso, kulula kakhulu ukutshala kunye nokukhathalela ezo mbiza zelotus zamatye amancinci.
Intyatyambo ye-lotus yamatye entle yokuhlobisa kwangaphakathi
Iintlobo ezidumileyo ze-lotus zamatye namhlanje
Ilotus yelitye leRuby
Ilotus yelitye leRuby I-lotus yamatye ithathwa njengeyona nto intle kwihlabathi. Zifumaneka endle ikakhulu kuMntla Merika. Ngokukhukhumala kobuhle namandla; ilitye lerubhi lotus yabamba iintliziyo zamehlo angenakubalwa ukusuka kwixesha lokuqala endayibonayo. Amagqabi anencindi amile okwerubhi ethambileyo eluhlaza; Umda wangaphandle ugqamile obomvu.
I-lotus yelitye elihle leruby
Ubuhle obugqwesileyo be ilitye lerubhi lotus ukwenza i-lotus yamatye ethandwa kakhulu. Zibekwe ukuhlobisa idesksi; idesika ishelufu yeencwadi; balcony… ngakumbi ngakumbi, zihlala zisetyenziswa njengezipho ezizodwa ngemihla yokuzalwa; iholide. Ngaphandle koko, ilitye lerubhi lotus Ikwanesakhono sokuhluza uthuli kakuhle kakhulu, inciphisa izinto eziyingozi emoyeni, ikunceda ukuba ube nendawo ephilayo efreshi ngokwenene.
Intsingiselo yesityalo se-ruby ​​lotus
Dola ilitye lotus
Dola ilitye lotus Olu luhlobo lwe-lotus yamatye kunye nobuhle obukhethekileyo phakathi kweentlobo ze-lotus zamatye. Obo bubodwa buvela kumagqabi amancinci; luhlaza okwesibhakabhaka; ngeenxa zonke njengeengqekembe zeedola. Bathetha ithamsanqa; Iintsikelelo kumnini. Olu hlobo lwe-succulent lufanelekile kakhulu kumhlobiso weevenkile zeeti zobisi, iivenkile zekhofi, njl.
Ilotus yelitye elipinki
Ukongeza kumaxabiso ukuba idollar ilitye lotus zisa ke zikwaluhlobo lwelitye lelotus elibamba iintliziyo zabo bonke abalandeli belotus yamatye kuba imizimba yabo inemibala emininzi ngokuxhomekeke kuhlobo. Inokuphila okubhityileyo okukhatshwa bubuhle obuhambelanayo ngokumila nombala.
Ilotus yelitye elipinki yedola esetyenziswa njengesipho
Ilotus yelitye elimdaka
Ilotus yelitye elimdaka aka itshokolethi ice lotus; Kuthathwa njenge-lotus yamatye ebonisa uxhulumaniso oluhlala luhleli lobuhlobo kunye nothando. Umbala wamagqabi welotus yelitye elimdaka uxhomekeke ikakhulu kubungakanani bokukhanya esifunyanwa sisityalo; ngokwesiqhelo brown okanye purple-black.
Umthi welotus welitye elimdaka
Ngaphandle kokuba ilitye elimdaka lotus Umbala awunambala njengezinye iintlobo ze-succulent, kodwa uqulethe ubuhle obunamandla kunye nobuntu. Ngoko ke, i-lotus yamatye e-brown yenye yeendlela zokuqala zokukhetha abo banesitayile esinokuzithemba kunye nesibindi.
I-lotus yelitye elimnyama
Kanye ukusuka kwigama, ilitye elimnyama elimnyama ikwabonisile ukuba lolona hlobo lufana nerozi lwezimuncumuncu. Umbala wayo awumenyezi njengezinye iintlobo ze-succulents; kodwa inobuhle berozi yokwenyani. Uphawu lwedangatye lothando luyadanyaza ngaphakathi kwezo thando ziyimfihlo.
Ubuhle be-lotus yamatye amnyama
Ngobukhulu bayo obuncinci, ilitye elimnyama elimnyama idla ngokutyalwa kwiimbiza ezihonjisiweyo ezithandekayo kwiitafile zokufunda; idesika ishelufu eludongeni okanye umhombiso wecafe. Black rose ilitye lotus imbiza Ngokuqinisekileyo iya kwenza indawo yakho ibe ntle kwaye ithandeke.
Black rose ilitye lotus imbiza
Ilitye likaBuddha Lotus
Ilitye likaBuddha Lotus unobubele ilitye lelotus yaziwa njenge lucky stone lotus; Kuba ihlala izisa ithamsanqa kumniniyo. Ungatsho I-lotus yamatye kaBuddha luhlobo lwe-lotus yamatye inamagqabi amaninzi afana nomfanekiso kaBuddha onamehlo angamawaka kunye nezandla eziliwaka. Amagqabi awo akhula arawndi kwaye arawndi, alungelelaniswe ngokulinganayo kwi-axis njenge ihlumelo lelotus apho uBuddha ikhona.
UBuddha weLotus yelitye yena watyala iimbiza zeterracotta
Ngenxa yezi zizathu zingasentla, i-lotus yamatye kaBuddha isetyenziswa kakhulu. Ngokukodwa, isetyenziswa njengesipho kuye wonke umntu ukuba athathe indawo yeminqweno yokuba abantu bafuna ukuthumelana eyona thamsanqa kunye nokuphelela.
Umthi we-lotus welitye likaBuddha
Lotus ilitye jade
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo ze-succulents, jade lotus babe namandla okomelela afuzisela unyamezelo; Ukunyamezela kunye nonaphakade wothando. Malunga ne-feng shui, jade lotus plant sisityalo esizisa ithamsanqa ngemali; impumelelo kwindlela yodumo kunye noxolo oluthambileyo kumniniyo.
Isityalo se-jade lotus
Nangona imbonakalo yayo encinci, intsingiselo kunye nokusetyenziswa kweli litye lotus ayincinci kwaphela. Lotus ilitye jade zidla ngokunikwa omnye komnye, zithumela uthando olufudumeleyo lokuhlakulela uthando nobuhlobo ngakumbi iglu.
Ubuhle be-jade lotus
I-lotus yelitye elineendlela ezine
Isizathu, iintlobo ilitye lelotus Le nto ibizwa ngokuba yi-quaternary kuba ikhula ibe ngamasebe ama-4 awohlukeneyo nazinzileyo. Amagqabi abekwe ngaphezulu komnye, edala ukumila okukhethekileyo ekungekho nesinye isityalo esinazo. Ngenxa yoko, olu hlobo lwe-lotus yamatye luthandwa kakhulu ngumntu wonke, ngaphandle koko bazisa inhlanhla kuwe kungakhathaliseki ukuba wenzani okanye uphi na.
Izityalo ezine-succulent ezityalwe kwiimbiza zeterracotta
Ngaphandle koko, I-lotus yelitye elineendlela ezine Ikwasebenza nokucoca umoya, ukufunxa ityhefu, kunye nokufunxa imitha yemitha kwizixhobo zombane. Ngokutsho kwezifundo ezininzi, ngumbala oluhlaza weli gqabi le-lotus yelitye ekwanceda umbono wabantu ukuba uphumle, uzisa ukugxila okuphezulu kubantu.
Ilotus yamatye edayimane
Ilotus yamatye edayimane aka ilitye elikhanyayo lelotus, ilitye eliluhlaza. Ilitye lelitye eligqame kakhulu ngenxa yobume bayo obutsala amehlo kunye nombala. Ekuqaleni, ndandifuna “ukuthenga” imbiza ukuze ndizenzele.
Noctilucent ilitye lotus
Ilotus yamatye edayimane imele amandla kunye nokuthanda ukuzingisa kuzo zonke iimeko zobomi, kwaye kwangaxeshanye kunjalo Uphawu lothando lwanaphakade. Ukongeza, kuzisa ubutyebi noxolo kumniniyo. Ngenxa yezi ntsingiselo zingasentla kunye nobuhle bayo, idayimani ilitye lotus Abantu abaninzi bakhetha ukuhombisa, njengezipho, …
Ubuhle bedayimani ilotus
Intliziyo yelitye lotus
Intliziyo yelitye lotus yenye yezona zintle zikhethekileyo zeentlobo zelotus zamatye. Yohlukileyo ukusuka kwigama ukuya kwimilo, ubukhulu kunye nombala. I-lotus yelitye lentliziyo inemilo emnandi kwaye eguquguqukayo kunye nombala omnandi. Oko kwaphula iintliziyo zabantu abaninzi xa bebona olu hlobo lwelotus yamatye.
ILotus yeLitye Lentliziyo – ILotus yeLitye Lentliziyo
Ngobo buhle, Intliziyo yelitye lotus iphumelele intando yomntu wonke. Ibekwe kwitafile yokutyela, idesika, itafile yokufunda, ikona yebalcony, njl.njl., kodwa idala imvakalelo yentuthuzelo kunye nokukhanya okufana nothando olunenzondelelo kumntu wonke. Kutheni “ungathengi” ezi mbiza zelotus zamatye entliziyo ngoko nangoko.
Ubuhle bentliziyo yelitye lotus
I-lotus yamatye eChrysanthemum
I-lotus yamatye eChrysanthemum luhlobo lwelotus yamatye eyaziwa kakhulu kumntu wonke. Amagqabi esi sityalo se-lotus alungiselelwe ukudala imilo efana ne-chrysanthemum yangempela. I-lotus yamatye e-chrysanthemum yenye yeentlobo ezimbalwa ze-succulents ezikwazi ukuqhakaza. Iintyatyambo ze-chrysanthemums entwasahlobo nasekupheleni kwehlobo ezinemibala eqaqambileyo (i-orenji, i-yellow yellow eqaqambileyo) ibonakala ihle kakhulu.
Isityalo se-lotus samatye eChrysanthemum
Njengezinye iintlobo ze-succulents, i-chrysanthemum lotus inamandla amakhulu kakhulu, ayifuni kakhulu ngokwemiqathango yokukhula kunye nophuhliso. Bafikelela ngamandla ekuphuhliseni kuzo zonke iimeko. Le yinto enye, chrysanthemum ilitye lotus luphawu lothando lwanaphakade, oluhlala luhleli oloyisa ubunzima obuninzi kunye nemingeni yobomi.
Ubuhle be-chrysanthemum lotus
Ilotus yamatye enamaphiko ebhabhathane
Xa ndiqala ukuva igama lohlobo ilitye lelotus Heyi, unokuqikelela Ubuhle belotus yamatye kunye namaphiko ebhabhathane. Luphawu lobunyani bendawo yakho eluhlaza. Ukongeza, iphinda ifanekisela ubutyebi, ubutyebi kunye nobutyebi, ukuzisa ubomi obunempumelelo kumniniyo.
Butterfly iphiko jade lotus plant
Inye into ekufuneka ivunywe ngamagqabi butterfly amaphiko ilitye lotus zodwa, zifana nendlela amabhabhathane anebhastile elibhlowu. Ukuba ungumnikazi wembiza yesi sityalo kwigadi yakho yasekhaya, ngokuqinisekileyo uya kuziva unomdla kwaye uvuyiswa bubuhle babo.
Ubuhle beloti enamaphiko ebhabhathane
Ilotus yelitye likaDragon
I-lotus yelitye le-Dragon yi-lotus yamatye entle ineyona milo yahlukileyo phakathi kwe-succulents; Amagqabi awo amile okweenzipho zenamba. Loo mahluko udala impembelelo ezintliziyweni zabantu xa beqala ukubona esi sityalo.
Ilotus yamatye enozipho lwedragoni etyalwe kancinci
Ngelo xesha, emagqabini, kukho imigca emhlophe engaqhelekanga kunye engaqhelekanga ekhanga amehlo anomdla. Kutsha nje, dragon uzipho ilitye lotus zizingelwa lulutsha oluninzi ngenxa yokuba lungafani. Ukongeza kusetyenziso lokuhombisa, ilitye lozipho lwedragoni nalo linefuthe lokucoca umoya ojikelezileyo, lizisa owona moya uhlaziyekileyo.
Ilotus yamatye enozipho lwedragoni etyalwe kwiimbiza zomthi
Inqaku liza kuphela, nali Iindidi ezili-12 eziphezulu ze-succulents ezintle zenza intliziyo yomntu wonke iwe. Hanoi Bonsai Ngethemba, ngeli nqaku, abafundi banokuzikhethela iimbiza ezintle ze-lotus zamatye ezincinci kunye ezintle ezifanelekileyo kubafundi. Kwangaxeshanye, ungalibali ukulandela nokuxhasa Hanoi Bonsai kunye ok!
Indawo yokuthengisa iintyatyambo zelotus ezintle nezitshiphu
Nceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza xa ufuna:
Cách chăm sóc cây sen đá đô la hồng | Hatgiongtihon.net